OGAALKA SOOMAALI-WEYN Qaybtii 4aad .W/Q:C/NAASIR GURAY MEECAAD. |
OGAALKA SOOMAALI-WEYN Qaybtii 4aad .W/Q:C/NAASIR GURAY MEECAAD.
Wixii ka horeeyey dagaal-waynihii I-aad ee dunida (1914-1918), Ingiriiska iyo Talyaaniga heshiis ayay ku ahaayeen qeybsiga dhulka Soomaaliyeed. Laakiin markii uu dagaalkii dhamaadey, sida aanu arki doono, waxaa is-beddeley hoggaankii siyaasadda dalka Talyaaniga. Waxaa markaas bilaabantey, guud ahaan in si xooggan uu khilaaf u soo kala dhex-galo aragtidii siyaasadeed ee labada dal. Taasi waxay dhalisey in xataa ay isku khilaafaan dhulkii ay Soomaalida ka boobayeen. Meesha uu khilaafkaas ku dhacayay waxay ahayd gobolka Ogaadeenya oo Ingiriisku uu la doonayay Itoobiya. Talyaaniguna isaga ayaa doonayay in uu ku dhul-fidsado oo uu ku darsado gobolladii uu Soomaaliya ka heystey.
Talyaanigu wuxuu qeybsigii Berliin nasiib ugu yeeshey degaanada ugu hodansan oo ay ku dhaqmaan qabaa’ilka Soomaaliyeed. Waxaa gacanta u galay dhulka ay ku taal xeebta dheer ee Soomaaliya ay la leedahay bad-waynta Hindiya. Dhererka xeebtaasi 2.000 km. waa ay ka badan tahay. Waxaa kaloo uu hantiyay gobollada ay maraan labada webi iyo gobolladii ay ka talinayeen labadii imaaradood ee ka dhisnaa Hobyo iyo Baargaal.
Degaanadaas koonfureed, Talyaanigu wuxuu ku soo galey qaab kiro ah. Dabayaaqadii qarnigii 19-aad, ayuu degmooyinkaas ka kireystey suldaankii ka talinayay Sensibaar oo isagu sida uu sheegan jiray in dadka iyo dhulkaba ay ahaayeen hanti uu leeyahay. Suldaan Sayid Siciid Barqash wuxuu ahaa ninka sheeganayay in uu ka taliyo dhamaan degaanada ku yaal xeebaha bari ee qaaradda Afrika. Waxaa xusid mudan, oggolaanshaha uu Suldaan Barqash ka heley Soomaalida, in ay ahayd mid la xidhiidha sheegashadiisii ahayd in uu yahay asharaaf oo uu fir ku leeyahay suubanihii Maxamad ahaa (naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee). Degmooyinka Soomaaliyeed oo markaas uu sida tooska ah uga talinayay waxay ahaayeen Kismaayo, Baraawe, Marka, Xamar iyo Warshiikh.
Markii ugu horeysey oo Talyaanigu uu soo gaadhey xeebaha koonfureed ee Soomaaliya, wuxuu yimid isaga oo ay gelbinayeen saraakiil iyo ganacsato ka tirsanaa maamulkii Sensibaar. Degmooyinkii Banaadir ayuu ku soo hor-marey. Dabadeed, sida heshiisku ahaa, waxaa lagu wareejiyey taladii degaanka. Markiiba waxaa ka hor yimid gadood teel-teel ah oo Soomaalidu ay ku diiddan yihiin in maamulka Talyaaniga uu soo caga dhigto dhulka Soomaaliyeed. Waxaa ugu waynaa kacdoonkii ka dhacay Jubbada Hoose iyo dagaalkii Biyamaal ee isna ka dhacay Shabeellada Hoose. Markii laga adkaadey Soomaalidii gadooddey, waxaa Talyaanigii u suuragashey in maamulkiisa uu si tartiib ah ugu baahiyo dhulkii gudaha ahaa ee uu u socdey. Gaar ahaan dhulka ku wanaagsan wax soo-saarka beeraha.
13/ 2- 1908-dii wasaaraddii arimaha dibadda ee Talyaaniga waxay soo saartey ogeysiis ay ku sheegeyso in dowladda Talyaaniga ay ku tala-jirto sidii ay uga faa’iideysan lahayd fursadaha ka jira dhulalka ay gumeysato. Dhulalkaasi waxay ahaayeen Ereteriya, gobollo kamid ah Soomaaliya (Koonfurta, bartamaha iyo bariga), laba gobollo kamid ah Liibiya waqooyiga (Tripolitania) iyo bariga (Cyrenaica). Meesha ugu muuqatey in ay ugu faa’iido badan tahay uguna tin-jilicsan tahay waxay ugu muuqatey in ay yihiin gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Gaar ahaan dhulka webiyadu maraan. Waxaa mashruucaas taageero xooggan la daba-taagnaa siyaasiyiin badan oo ka soo jeedey jasiiradda Sicily oo ah gobol wayn oo ku yaal koonfurta Itaaliya. Ragga xambaaray ololaha mashruucaas ninka ugu waynaa uguna cod dheeraa waxaa la odhan jiray Francesco Crispi. Isaga iyo raggii la codka ahaa, waxay ujeeddadoodu ahayd in ay shaqo u abuuraan dadka ku dhaqan gobolka Sicily ee saboolka ahaa. Isla-markaas ay kabaan dhaqaalaha dowladda.
5/ 4- 1908-dii barlamaankii Talyaaniga wuxuu dejiyay sharci la xidhiidha in la mideeyo gobollada Soomaaliya ee Talyaaniga hoos yimaada. Islamarkaas la siiyo magaca Soomaalidii Talyaaniga (Somalia Italiana). Awoodii mustacmaradda waxay markaas u qeybsantey saddex meelood. Mid waa awooddii barlamaanka Talyaaniga, mid waa aawooddii magaalo-madaxda (Xamar). Midna waa awoodda dowladda mustacmaradda. Awooddan danbe ayaa waxay ahayd midda keliya oo la beddelayo. Duqa magaalo-madaxda, isagu waxay awooddiisu ku eg-tahay ganacsiga dhoofaya, qiimeynta sarifka, kor u-qaadidda iyo dhimista cashuuraha gudaha ah iyo hagaajinta maamulka rayidka oo ay kamid yihiin ruqsadaha dhulka, ugaarsiga iyo kalluumeysiga. (Robert L. Hess. Italian Colonialism in Somalia, 1966, p. 102, Chicago – USA).
“ Muddo sanado ah ayaa (wasaaradda arimaha dibadda) waxay si joogto ah ugu dheganeyd, gobollada koonfureed ee mustacmaradda, gaar ahaan Banaadir iyo dhulka gudaha ah in si muuqata ay munaasib ugu tahay in la dejiyo dad badan oo Talyaani ah “.(Ex-Italian Somaliland. E. Sylvia Pankhurst 1951. with a forward by Peter Freeman. p. 90).
Qorshaha gumeysigu wuxuu ahaa hal-abuur kaabad dhaqaale oo si xooggan looga faa’iideysto. Xilligaas hore arinta Talyaaniga uu ugu baahida badnaa waxay ahayd beerista cudbiga. Tijaabooyin ayuu ka qaadey cudbi uu ku beerey koonfurta Soomaaliya. Waxaa uga soo baxay in cudbigaasi uu yahay mid ka tayo wanaagsan cudbiyada dunida laga qiimeyn jiray ee ah kuwa laga keeno waddamada Mareykanka, Masar iyo Australiya. Islamarkaa Talyaaniga waxaa u muuqatay, dhulka ay maraan biyaha webiga Shabeelle, gaar ahaan gobolka Banaadir, cudbiga halkaas lagu beero in uu awood u leeyahay in uu dabooli karo baahida cudbiga ee wershadaha dalkiisa. Waxaa kaloo Talyaaniga uu xiiso u qabay khudaarta iyo faakihada ka baxda dhulalka cimilada kulul (tropical fruits).
Sidaas ayaa hannaankii siyaasadeed ee Talyaanigu uu ka dhisey Soomaaliya, wuxuu ku noqdey mid durbaba aanan ku baahin degaanada ay ku dhaqan yihiin Soomaalida xoolo-raacatada ah. Bal wuxuu si xooggan ugu urursanaa dhulka webiyadu maraan oo beeraha ku wanaagsan. Sababtu waxay ahayd, qorshihiisa hore ee la xidhiidhey fursadaha wax soo-saarka leh waxay ku jaan-go’naayeen degaankaas. Sabab labaad ayaa jirtay oo ahayd, Soomaalida xoolo-raacatada ah maahayn dad meel ku dagan oo u qabsoomi karay siyaasaddii gumeysiga. Awoodda gumeysigu ma gaarsiisneyn in uu la hayaamo qoysaska reer guuraaga ah ee hadba meel u hayaamaya. Isaguna dhaqaale xumi iyo shaqo la’aan dalkiisa tiil oo ka soo gaadhey dagaalkii I-aad ee dunida, ayuu doonayay in uu si deg-deg ah uga kabto.
Waxaa xusid mudan, barnaamijkii Talyaaniga uu ka lahaa Banaadir in uu ahaa mid la dejiyay intuusan nadaamkiisu ku baahin dalka Soomaaliya. Sanadkii 1908-ddii, wasiirkii dibadda ee Talyaaniga Tomasso Tittoni (1855-1931), wuxuu dowladda soo hor-dhigey barnaamij ku wajahan sidii looga faa’iideysan lahaa dhulka beeraha ku wanaagsan oo ay maraan labada webi Jubba iyo Shabeelle. Waxaa barnaamijkiisa kamid ahaa in dowladda Talyaaniga ay kharaj ku bixiso sidii loo hagaajin lahaa dhisma-hoosaadka gobollada koonfureed. Si gaar ah waxaa loo qorsheeyey in la dhiso waddooyinka isku xira Xamar iyo Luuq, Xamar iyo Baar-dheere, Xamar iyo Beled-wayne. Isla-xilligaas waxaa dalka Talyaaniga laga bilaabey dicaayad xoog badan oo loo sameynayo dhalinyarada iyo qoysaska u dhoofaya Soomaaliya si ay uga soo shaqeystaan. Waxaa arintaas garab taagnaa maal-gelin iyo dhul laga shaqeysto oo dowladda Talyaaniga ay u ballan-qaadey. (Isla marjicii hore. p. 91).
Isla-sanadkaas (1908-dii), fikrado mug wayn ayaa jiray kuwaas oo siyaasiyiinta Talyaaniga ay ku soo bandhigeen doodihii ay ku qabteen barlamaanka. Waxay la xidhiidheen sidii Soomaaliya loo dejin lahaa jaaliyad xoog badan oo Talyaani ah. Dowladdu waxay markaas jideysey, qofkii doonaya in uu Soomaaliya dego in uu ku baxo hantidiisa gaarka ah. Gacan uu dowladda kaga helayo socdaalkiisa ma jirin. Laakiin markii uu Soomaaliya gaaro, waxaa la siinayaa dhul-beeraad baaxaddiisu tahay 5.000 oo akre (acre), kaas oo u dhigma 43.560 cag oo afar-geesood ah. Waxaa u weheliya oo la siinayaa 500.000 oo liiro. Muddo toban sano ah ayay tahay in uu dhulkaas ka dhigo beer wax soo-saar leh. Muddada 5-ta sano ee hore, cashuur laga qaadi-maayo. Haddii uu muddadaas shaqo ku siiyo 15 qof oo Talyaani ah. cashuur-dhaafku wuxuu soconayaa muddo 10 sano ah. Inkasta oo dood dheer ay gashay aragtidaas, misana sanadkii 1909-kii iyadii oo aanan wax wayn laga beddelin ayaa barlamaankii laga ansixiyay.
Sidaas ayaa Talyaanigu wuxuu u abbaartey dhulka beeraha ku wanaagsan oo ay ku dhamaadaan biyaha labada webi ee Juba iyo Shabeele. Markaas ayaa qoysaskii Talyaaniga, iyaga oo wareento ah si deg-deg badan ugu soo qul-quleen geeska Afrika. Dhaqaalaha yar oo ay wateen qoysaska jaaliyadaha ee la doonayay in Soomaaliya lagu tallaalo, iyo hantida yar oo ay dowladdoodu ugu yaboohdey, maahayn mid ku filnaa si ay u caga-dhigtaan Soomaaliya. Waxaase barnaamijkoodii u cududeynayey, xoogga iyo hantida dadkii Soomaaliyeed oo ay boobka ugu socdeen. Kuwaas oo qorshuhu ahaa in dhulkoodana bilaash lagula wareego, xooggoodana bilaasha loo adeegsado.
Dabadeed waxaa bilaabatay qoysas tira badan oo Talyaani ah in ay ku soo qulqulaan degaanadii koonfureed ee Soomaaliya. Inkasta oo ay sheegtaan in ay il-baxnimo wadeen, misana imaatinkoodii kheyr uma ayan ahayn dadkii ku dhaqnaa degaanka. Gunnimo iyo boob aanan hambo lahayn ayay dhaxleen dadkii Soomaaliyeed oo ay u yimaadeen. Dadkaasi ku soo qul-qulayay Soomaaliya, waxay u badnaayeen beeraleydii saboolka aheyd ee ku dhaqnaa gobollada koonfureed ee Talyaaniga.
Xilligaas waxaa jiray laba xoog oo Soomaalida u dhisnaa, kuwaas oo uu damac kaga jiray in maamulkooda ay soo gaarsiiyaan degaanka Banaadir. Xoog wuxuu ahaa saldanaddii uu Yuusuf Cali ka dhisey Hobyo, taas oo xuduudda koonfureed ee maamulkeeda uu ku ekaa degmada Ceel-buur. Xoogga kale wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqii Daraawiishta, kuwaas oo iyaguna ay qalcaddii Beled-wayne astaan u ahayd xadka koonfureed dhulka ay ciidamadooda sida xorta ah u maraan. Labadaas xoog oo iyaga dhexdooda uu khilaaf ka jiray, halkaas ayuu ku kala ekaa xadkooda. Wacyiga bulshadii Soomaaliyeed ee ku dhaqneyd Banaadir wuxuu ahaa mid hooseeyey. Taasi waxay Talyaanigii siisey fursad ah in ay si fudud oo deg-deg badan u fulaan mashaariicdiisii.
Sanadkii 1920-kii waxaa la soo af-jaray halgankii dhaqdhaqaaqii Daraawiishta. Waxaa halkaas ka baxay xoog ku dagaalamayay magaca Soomaaliyeed oo ku wajahnaa xoogaggii shisheeyaha ahaa. Isla-sanadkaas, Talyaanigii badnaa ee soo degey Soomaaliya waxay dhiseen is-bahaysi ururinaya beeraleyda Talyaaniga ee ku sugan Soomaaliya. Waxaa lagu magacaabi jiray (SAIS – Societa Agricola Italo-Somala). Is-bahaysigan uu Talyaanigu ka dhisay koonfurta Soomaaliya waxaa odey ka ahaa wiil amiir ah oo la yiraahdo Luigi Amedeo (1873-1933). Waxaa awoowe u ahaa boqorkii Talyaaniga ee la odhan jiray King Victor Emanuel II (1849-1861).
Jabkii Daraawiishta dabadeed laba sano, dalka Talyaaniga waxaa taladiisii la wareegey xisbigii fashiistada ahaa (Il Partito Fascista Repubblicano). Bishii oktoober 1922-kii ayaa xisbigaas oo xoog ku qabsadey taladii dalka, iyada oo uu taageerayo boqorkii Talyaaniga King Victor Emanuel III. Hoggaamiyihii xisbigaas Benito Mussolini (1983-1945), waxaa markaas ku daba-saftey dad-wayne tiro badan oo ka cabanayay dhaqaale xumi soo waajahdey dalka dagaalkii I-aad dabadeed. Isaguna nin af-tahan ah ayuu ahaa oo hadal ayuu ku qanciyay bulshadii raacdey. Waxaa xusid mudan fashiistada in ay tahay aragti siyaasadeed oo waddaniyad iyo qowmiyad salka ku heysa. Isla-markaas waa hannaan siyaasadeed oo hal xisbi uu talada u hayo, astaanna uu u yahay keligi-taliye dusha ka fadhiya, kaas oo aanan saamaxayn in la mucaarado. Waa aragti aanan xushmad u hayn xaq-dhowrka aadamiga.Giovanni Gentile oo kamid ahaa filosofiintii fashiistada, sida uu ku sheegey buugiisii uu ugu magac daray Mad-habta Fashiistada (La Dottorine del Fascismo), in aadamigu ku jiro hayaan uu isku kala qeybinayo dabadeedna ku dagaalamayo. Noloshiisana waxaa saldhig u ah iska hor-imaadka ay ku legdamayaan iyo guulaha ay kala helaan. (Mike Hawkins. Nature as Model and Nature as threat. Cambridge University Press. 1997. P. 285. London – UK).
Sanadkaas ay fashiistada xukunka qabsatay sanadkii xigay (1923-kii) waxay Soomaaliya u soo magacawdey nin dhiigya-cab ah oo la yiraahdo Cesare Maria De Vecchi (1884-1959). Wuxuu ahaa jeneraal ka tirsan ciidamadii shaadhka madoobaa (Blackshirts Army), kuwaas oo ka danbeeyey in fashiistadu ku guuleysato xukunka Talyaaniga. Isagu wuxuu kamid ahaa raggii ka danbeeyey halaaggii ay ciidamadaas u geysteen dadkii ka soo hor-jeedey ee Talyaaniga ahaa. C.M. De Vecchi wuxuu ahaa sarkaal arxan daran, siyaasi fashiistadu ku dhaarato, wuxuu ahaa gacantii midig ee Benitto Mussoline. Markay taariikhdu ahayd 5/ 12- 1923-kii, De Vecchi wuxuu soo gaarey Xamar. Laba sano dabadeed isaga ayaa Xamar u doortey magaalo-madax.
Waa ay muuqatey maamulkaas cunsuriga ah iyo guddoomiyaha ay soo magacaabeen, culeyska ay u geysanayaan bulshadii Soomaaliyeed ee gacanta ugu jiray. De Vecchi wuxuu markiiba bilaabey in uu ku shaqeeyo siyaasad gacan adag. Gaar ahaan dadkii beeraleyda ahaa ee ku dhaqnaa dhulka ay webiyadu maraan, wuxuu ku dhigey wax laga argagaxo. Talyaanigu wuxuu horey isu-siiyay wixii xuquuq ahaa ee dhulka la xidhiidha. De Vecchi wuxuu bilaabey in uu dadkii xoog uga raro degaamadii beeraha ku wanaagsanaa. Intaas ugama hadhine, wuxuu bilaabey in inta uu ururiyo uu ku shaqeysto. Kii diidana ciqaabtiisu dil ayay ahayd. Dhisma-hoosaadyadii uu u baahnaa wuxuu ku dhisey bulshadii Soomaaliyeed ee uu ugu tegey degaamadaas.
Xanuunka ay fashiistadu ku reebtey bulshadii Soomaaliyeed oo ay gumeysatay waxaa inoo muujinaya is-beddelkii ku yimid dhaqaalihii ay Soomaaliya ka heli jirtay dowladda Talyaaniga. Halka uu dhaqaalahaas dheelli-tirka faa’iidada ah uu ahaa sanadihii 1923-kii iyo 1924-kii 2.000.000 oo liiro iyo 5.000.000 oo liiro. Sanadihii 1926 iyo 1927 waxay noqdeen 100.000.000 iyo 130.000.000 oo liiro. Sanadahaasi waa sanadaha loo yaqaan Faashiistadii oo Dib u soo Celisey Hanashadii (Fascist Reconquest). Waa muuqataa bulshadii Soomaaliyeed ee beeraleyda ahayd in ayan deeqsinimo ka ahayn hantida intaas le’eg in ay ku kabana dhaqaalaha Talyaaniga. Bal xanuun badan ayaa weheliyay oo ay ku shaqeeyeen.
Hoogga iyo halaagga, maamulkii De Vecchi uu badey Soomaalida, waxaa tusaale-dhig u ah mashruuc biyaha webiga ku gaadhsiinayay dhul aad uga fog meesha webigu maro. Waxay u dhowdahay degmada Qoryooley. Mashruucaas oo Soomaalidu ay ku magacaabeen Kelli-asayle, ayaa hir-gelintiisii waxaa ku dhintey dad tira badan oo Soomaali ah. Tira-badnida haweenkii aseyda qaadey oo raggooda ay halkaas ku dhinteen, ayaa magacaas loogu bixiyay. Dadkaasi waxay ahaayeen dadkii lagu shaqeynayay ee lagu qodayay kannaalka biyuhu marayaan. Iyagu waxay u le’deen baahi, dil ula-kac ah iyo cudurro ay kaneecadu ugu horeyso. Tiro kala duwan ayaa la sheegaa in Soomaali ay halkaas kaga dhimatey. Tirada ugu yar oo la sheego waxay tahay 26.000 oo qof. (Waxaan ka soo xiganey wareysi aanu la yeelanay Maxamad Saalax Ladane. 14/ 3- 2010. Boosaaso – Soomaaliya).
Dabadeed maamulkii Talyaaniga wuxuu ku baahay dhulka koonfureed ee gudaha ah. Sanadkii 1926-kii amiirkii Talyaaniga ahaa Luigi Amedeo, wuxuu odey ka noqday 16 tuulo oo ku yaal agagaarka magaalada Jowhar. Waxaa halkaas ku dhaqnaa beeralay Soomaaliyeed oo tiradoodu ay gaarayso 3.000 oo qof. Intuusan dagaalkii lab-aad bilaaban, Soomaalida waxaa kula dhaqnaa degaanka 2.000 oo Talyaani ah. Iyagu waxay ka shaqeynayeen mashaariic waawayn oo tijaabooyinkoodii lagu guuleystay. Waxay isugu jireen beero iyo wershado. Degmada Jowhar waxay markaas qaadatay magaca gobolkii uuLuigi Amedeo amiirka ka ahaa. Sidaas ayaa degmadii waxaa loogu bixiyay Villa Abruzzi.
 Ingiriis Axmaariyo Talyan, wey akeekimiye
 Arligaa la kala boobayaa nin u itaal roone
 Anse ila ah aakhiro Sabaan iligyadiisiiye
 Waa duni la kala iibsaday oon nala ogeysiine
 Waa duni ninkaad aamintaa kuu abees yahaye
 Waa duni xaqii la arkayaa la arjumayaaye
 Waa duni akhyaartii lahayd iib ku doon tahaye
 Anse ila ah aakhiro sabaan iligyadiisiiy
 Afka iyo adduunkaa hadloo oodan sadarkiiye
 Ninka gacanta midig oodan tahay laga il-roonaaye
 Anse ila ah aakhiro sabaan iligyadiisiiye (Faarax Nuur)
Qallinkii:C/naasir Guray Meecaad L/H.Hargeysa/Somaliland.
XIGASHO:Ururintii Aqoonyahan Dr Saadiq Eenow[Wasiirkii hore Caafimaad Maamul Goboleedka Putland/Soomaaliya.